Halyeey Man United ah oo si jees-jees ah kag hadlay go’aankii uu Dybala ku diiday imaatinka garoonka Old Trafford – Gool FM
(Manchester) 13 Agoosto 2019.Halyeey kooxda Manchester United ah ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay go’aankii uu Paulo Dybala isaga diiday u dhaqaaqista Red Devils, inta lagu gudi jiray suuqa haatan socda ee xagaaga.
Xiddiga kooxda kubadda cagta Juventus ee Paulo Dybala ayaa si weyn lala xiriirinayay inuu ku biirayo naadiga Manchester United suuqan xagaaga, kahor inta uusan u fashilmin heshiiska arrimo dhaqaalo aawgood, taasoo dhalisay inuu diido u dhaqaaqista garoonka Old Trafford xagaagaan.
Hadaba wargeyska “Daily Mail” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay halyeeyga kubada cagta ee dalka England iyo kooxda Manchester United ee Rio Ferdinand waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Ma aqaano go’aanka uu ku diiday Paulo Dybala ku biirista kooxda Manchester United isagoo ka war qaba inuu fadhiyo kursiga keydka ee Juventus, wuxuu u baahan yahay inuu dib u soo bilaabo ciyaarista kubada cagta”.
“Waxaa laga yaabaa inuu ku fekerayay inuu ka ciyaaro tartanka Champions League, ama uu sii wato kursiga keydka ee kooxda Juventus halkii uu u ciyaari lahaa Manchester United”.
“Hagaag, waan ku faraxsanahay inuusan imaanin kooxda, sababtoo ah ma lahan tayada saxda ah ee aan ka doonayo ciyaaryahan Manchester United ah”. ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Rio Ferdinand.